Fijery manerantany momba ny andron’ny ady amin’ny kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2018 8:29 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Português, 简体中文, 繁體中文, Français, Español, English
Ny 18 Janoary, hamoaka ny Technology for Transparency Network, fikarohana ifarimbonana mandrakitra an-tsarintany ireo tetikasa amin'ny aterineto izay mampiroborobo bebe kokoa ny mangarahara, ny tamberin'andraikitry ny governemanta, ary ny fandraisan'olom-pirenena andraikitra ny Global Voices. Ity no voalohany amin'ireo andian-dahatsoratra izay hitrandraka ireo lohahevitra mifandraika amin'izany amin'ny alalan'ny fijerin'ireo bilaogera manerantany. Mba hanombohana izany, andeha hojerentsika ny fomba namalian'ireo bilaogera ny Andro iraisam-pirenena miady amin'ny kolikoly, izay nosoniavina ho lalàna tamin'ny taona 2003 tamin'ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana Miady amin'ny kolikoly ary tontosaina isan-taona isaky ny 9 Desambra.
Ao amin'ny Space for Transparency, bilaogy ofisialin'ny Transparency International, mijery indray ny toetry ny fikatrohana amin'ny ady amin'ny kolikoly tamin'ny taona 2009 i Georg Neumann :
Mihamaro ireo mpikatroka manohitra ny kolikoly niharan'ny fanafihana. Namoy ny ainy tamin'izany ireo mpanao gazety manoratra momba ny kolikoly eo amin'ny politika sy ny fiarahamonina tahaka an'i Lasantha Wickramatunga any Sri Lanka tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Niatrika fandrahonana sy notapenam-bava ireo mpikatroka avy any Bosnia-Herzegovina, Borondi, Goatemala na Zimbaboe. Ankalazaina amin'ny andro iray ny Andro ho an'ny Ady amin'ny kolikoly mba hahatsiarovana, hanekena sy hanomezana voninahitra ireo mahery fo sy tsy manan-tahotra ireo, izay nigadra na namoy ny ainy tamin'ny fiheverana fa amin'ny alàlan'ny fiadiana amin'ny kolikoly no hahatonga izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa.
Manamarika ihany koa i Neumann fa tamin'ny taona 2009 dia nahitana fandaniana rafitra iray tsy nahomby izay tsy mitaky amin'ireo mpikambana ao amin'ny fitantanam-panjakana hitady hevitra amin'ny ONG mahaleotena any amin'ny fireneny. Ao amin'ny lahatsary Youtube maharitra dimy minitra, mamaritra ny andraikitra lehibe eo amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanatsarana ny fitantanana i Peter Eigen, mpanorina ny Transparency International:
Neumann also notes that 2009 saw the passing of a flawed review mechanism which doesn't require member states to seek input from independent NGO's based in their countries.
Saingy tsy vaovao ratsy avokoa ny tamin'ny taona 2009, hoy i Neumann. Misy 40 ankehitriny ireo Foibe manerantany momba ny Fiarovana sy ny Toro-hevitra mikasika ny Lalàna izay manome toro-hevitra ara-dalàna ho an'ireo lasibatry ny kolikoly. Ary nanaporofo ihany koa ny media sosialy fa fitaovana mahery vaika amin'ny fampiroboroboana ny mangarahahara sy ny ady amin'ny kolikoly izy. Tany India ohatra, nanomboka wiki i J. N. Jayashree mba hiarovana ny vadiny izay atahorana ny fiarovana azy noho ny hetsika ataony amin'ny fanaovana ampamoaka. Ao Maraoka indray, nanomboka namoaka lahatsary tao amin'ny Youtube ahitana polisy manaiky kolikoly ny mpikatroka tsy fantatra anarana miady amin'ny kolikoly.
Ato amin'ny Global Voices, maro ireo lahatsoratra nankalaza ny Andro Iadiana ny kolikoly tamin'ny volana lasa. Bhumika Ghimire nanamarika fa nampilaharan'ny Transparency International ho iray amin'ireo firenena mpanao kolikoly indrindra manerantany i Nepal. Mifandray amin'ireo bilaogera Nepaley hafa, mampiseho ny lahatsoratr'i Bhumika fa misy fiantraikany amin'ny toekarena, ny fitantanana, sy ny asam-panjakana, ary koa ny fanambadiana mihitsy aza ny kolikoly any Nepal .
‘Mivoaka i Arruda’. Twitpic avy amin'i Cleudson Fernandes, mpampiasa Twitter @cleudsonf, nahazoana alalana.
Tany Brezila, nipoaka ny herisetra teo amin'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny Andro iadiana amin'ny kolikoly:
Mitaky ny fanesorana ny governoran'ny distrika federaly, Jose Roberto Arruda, sy ny lefiny, Paulo Octavio ireo mpanao hetsi-panoherana, ankoatra ny fanadihadiana lalina natao tamin'ireo antoko rehetra voatonona tamin'ny tantara ratsy momba ny kolikoly izay nitarika ny hetsika nataon'ny polisy nantsoina hoe Boatin'i Pandora. Araka ny famotorana, ny governora Arruda no azo antoka fa voalohany mahazo kolikoly R $ 600,000 (eo amin'ny 340.000 dolara) isam-bolana izay nahazoan'ireo mpiara-dia eo amin'ireo mpikambana amin'ny parlemanta distrika, mpandraharaha ary manampahefam-panjakana tombontsoa
Transparency HackDay tany São Paulo, sary avy amin'i Alexandre Fugita, nampiasaina tamin'ny lisansa Creative Commons.
Saingy misy ihany koa ny antony hisian'ny fanantenana any Brezila raha ny momba ny mangarahara sy ny fisokafam-pitantanana, araka ny fanazavan'i Paula Goés herinandro talohan'ny andro iadiana amin'ny kolikoly:
Natomboka tany São Paulo tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra ny Transparência [Transparency] Hackday voalohany, “roa andro ho an'ny fijirihana ny politika Breziliana”, ary natao tamin'ity herinandro ity ny fiarahana farany, tamin'ny 1 sy 2 Desambra, tao Brasília renivohitra. Nokarakarain'ireo mpanao gazety Daniela Silva sy Pedro Markun, azo nidirana maimaimpoana ny hetsika ary fotoana iray ahafahan'ireo mpikirakira rindrambaiko, mpanao gazety sy mpikaroka hivondrona mba hitady fomba “hanakarana” tahiry avy amin'ireo tranonkala ofisialy sy hamorona fampiharana mitondra mangarahara sy fandraisana anjara amin'ny dingana ara-politika.
Mitondra ireo mpamaky amin'ny lahatsoratra maromaro manodidina ny tontolon'ny bilaogy mifandraika amin'ny mangarahara, ny kolikoly, sy ny andraikitry ny governemanta ihany koa ireo tonian-dahatsoratry ny Global Voices. Mijery ny andraikitra mampidi-dozan'ny kolikoly amin'ny fanarenana an'i Afghanistan i Peter Marton. Ao Okraina, mandritra izany, miarahaba ireo mponina ao Kabul noho ny fanasaziana ny ben'ny tanànany higadra efa-taona an-tranomaizina noho ny kolikoly i Petro ary mieritreritra ny fomba hahafeno haingana ny fonjan'i Kiev raha hampiharina ao amin'ny fireneny ny lalàna mitovy amin'izany. Manoratra ao amin'ny Registan.net i Alexander Visotzky mijery ny fiampangana kolikoly an'i Mukhtar Dzhakishev noho ny fivarotana Oranioma tsy ara-dalàna ary namintina hoe: “toa mihoatra noho ny lalao politika fa tsy fikasana hanongotra ny kolikoly ny fiadiana amin'ny kolikoly any Kazakhstan.” Manoratra avy any Japana, manondro momba ireo raharaha kolikoly ratsy indrindra tamin'ny taona 2009 tany Japana avy amin'ny Transparency International i Scilla Alecci. Farany, manoratra avy ao amin'ny nosy Karaiba ao Pôrtô Rikô, “Gil the Jenius” mangataka sazy mafy kokoa ho an'ireo manampahefana ara-panjakana voaheloka amin'ny kolikoly.
Raha mijery ny hetsika fanoherana ny kolikoly tamin'ny taona 2009, mahita isika fa mbola malaza manerantany ny kolontsaina raiki-tapisaka amin'ny kolikoly. Saingy mahita koa isika fa mitombo ny adihevitra antserasera momba ny zavatra azo atao mba hanafoanana ny kolikoly, hampiroborobo ny mangarahara, ary hampitombo ny fandraisana andraikitra sivika. Amin'ny lahatsoratra hoavy, hojerentsika manokana ireo adihevitra an-tserasera sy tetikasa amin'ny aterineto mba hampiroborobo ny mangarahara sy hiadiana amin'ny kolikoly any Nizeria sy Shina.